Date: 28 mars 2017 - 12:49
Saika hanotany tompoko, nanadoa patanty aho omaly. Du simple au double ny nasaina naloako. Fa ahoana mihitsy moa no fikajiana azy ireny?
Nony teo amin'ny caisse, dia niy nibitsibitsika tamiko hoe naninona no tsy niresaka tamin'i ranona fa iny sefo iny afaka hiafnamboarana tsara. Hay ve misy an'izany koa hoe miresaka amin'i sefo dia mahazo mor e? Nisy tamintsika ve ny efa tena nanaoa 'izay dia nahomby?
Misaotra mialoha amin'ny valim-panontaniana
Re: Impôts synthétiques
Date: 28 mars 2017 - 13:19
Inona no dikan'ilay hoe du simple au double azafady ? Fa raovina no faran'ny patente mou zao ? de niova ve ny vola naloanao sa toy ny isantaona ihany ? Misaotra
Date: 28 mars 2017 - 15:15
Ny vola naloa no du simple au double, izany hoe tena avo roa heny ara-bakiteny ny vola nasain'ny fisc naloako. Tamin'ny herin-taona antsasaky ny tamin'ty taona ity. Amin'ny 31 mars ny faran'ny fandoavana azy, ary ay delà de cette date, une pénalisation de 100 mille Ar s'impose.
Grave an; tena izay mba mandoa hetra ihany no botriana fa tena nody be ny saiko hoe ny lalana eto Mada regarega be, ny qualité de service public ZERO, fa lasa aiza ary izany ny hetra naloan'ny contribuables e???? Ireo mpiasam-panjakana mandray karama avy amin'ny volam-bahoaka MANALIKA sy mitrerotrerona ary mandatsa. Mba nanotany aho hoe fa maninona no lasa double io taux io, dia ny valiny hoe IO NO IZY KA HANDOA ENAO TSARA TSY HANDOA ENAO TSY MAMPANINONA ANAY KOA!!!
Vraiment, soa aho fa tsy mpiteny ratsy fa raha tsy izany, asa angamba izany vava ratsy nahazo an'ireo. Jereo nge ny vhv mpiasan'ny fisc e, matavitavy manaradamaody be daholo, hita hoe VOKY NY VOLAM-BAHOAKA.
MPAMORY HETRA TOKOA FA TSY LAINGA
Date: 28 mars 2017 - 15:42
Izay ilay lazaiko amin'ny sujet teo aloha hoe <<tsy handoa hetra intsony aho>>. Vao miditra ny fisc nge dia miarahab de ny sasany tsy miarahaba, miresaka lamody ny sasany, nandoa hetra aho tamin'ny herinandro dia hoy ilay agent refa voaloako ny volako hoe raha mba te hanome kely fahafampo ianao dia raisina an-tanan-dro.
Date: 29 mars 2017 - 18:31
Hono oa, fa ny impôt synthétique ve tsy 5% ny CA annuel déclarenao de zay no aloha eny am caisse?
Misy barême koa ange reny fa tsy ze tian'ilay mpiasa ao e
Ary tokony ekeny daholo ze déclaration ataonao, fa rehefa avy eo izy manana zo hi contrôle any aminay raha misy tsy mazava aminy, rehefa avy eo....
Date: 30 mars 2017 - 09:55
Ny impôts synthétiques dia ho an'olona manao épicerie tsy ao anatin'izay ny atao hoe vente de marchandises générales, ka ny IS dia 220000 ar tamin'ity taona ity forfaitaire io ho an'ny épicerie
Date: 30 mars 2017 - 14:47
Transport ny ahy, ary izy ihany no nanoratsoratra azy tao anatin'ilay ordinateur-ny.
Za rey olona dia manahy fa ho avy koa ny fitsarambahoaka à l'encontre des mpiasan'ny fisc, raha mitohy izao satria dia milahatra be ny mpandoa hetra nefa ry madama isany mijery akanjo entina mpivarodamba, dé ny lhl mifoka sigara ao antokontany. Ny sasany mihinana nem, ary ny hafa manao jeux amin'ny ordinateur. Raha te hahita tsara ianareo dia mandehana mankao Ambatomainty fa dia afa-po tsara ianareo hoe izao ve ny olona voakaraman'ny vahoaka? Ambonin'ny karama dia mahazo ristourne sns, bdb mihoatra noho ny fonctionnaires rehetra???
Date: 15 avril 2017 - 16:41
Fanontaniana kely: Nareo ve tsy @ ty mandoa hetra nefa lanilanin'ny mpitondra @ revy fotsiny? Izay tsy lany dia entin'i clôdine sy ry Pierre ranjeva mitsoaka any ivelany?
Date: 08 mai 2017 - 08:27
Ny hetra dia adidy masina, hoan'ny firenena mandroso fahafaham-baraka mihitsy izany mitsoaka hetra izany.
Jereo ny aferan'ny mpanao baolina malaza mitsoaka hetra tena tsy azo hisangiana mihitsy any.
Fa ny aty amintsika ireharehana indray ny tsy fandoavan-ketra na hoe tokony 10 Millions naloa de 1 Million fotsiny no tena naloa.
$ongomby> Tsy ireo ihany no nitondra vola nilefa fa betsaka sy maro tokoa na dia orinasa lazaina matanjaka sy mijoro ara-dalàna ireo dia manao évasion fiscale ny ankamaroany.
Fehiny : Tokony hovaina ny lalàna sy ny fomba fiasa eto, tokony ho tsorina ary tokony mitovy régime daholo samy mandoa TVA fa ny taux no tao samihafa arakaraky ny activités dia mora ny manao recoupement ny CA.
Date: 06 juin 2017 - 13:55
Réforma> marina ny anao fa any ivelany kosa misy vokatra mivaingana ny fandoavan-ketra. Aty @ tanana to famokisana ny mpitondra fotsiny. Aza omena tsiny rah ho kivy ny olona. Any ivelany ary atao mihitsy fomba rehetra anamorana ny fomba fandoavan-ketra : plateforme web eny fa na @ téléphone ary efa afaka andovana hetra any Ivelany. Fa ny eto @tsika araka io voalaza etsy ambony io, enao mandoa vola ndray no ampifilafilaina.
Ny naha lagy ana indray mandé zay fa raisin'lay ramatoa zah dia aveo ilaozany miresaka lehilahy sy mijerijery sary sur fb miaraka @ namana.
Tena mampalaelo fa ny manao ny rariny ndray no victime eto @tsika fa ny manao ny tsy mety ndray no libre sy mizesta @nao
Date: 15 juin 2017 - 19:10
bjr. azoko avoka fb ve ity sujet ity fa tiko ho apafantarina koakoa ny zava manjoa ny contribuables eto mada?
Date: 17 juin 2017 - 08:16
Inona moa ny olana tsy amoahanao azy? Avoahy ho hitan'ny vahoaka fa mafy ny tsindry iainana na dia hoe efa handoa vola ho an'ny fanjakana izao aza.